Ndege yavatakurwi yakarovera muPacific Ocean apo yaiedza kumhara muPetropavlovsk
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Ndege yavatakurwi yakarovera muPacific Ocean apo yaiedza kumhara muPetropavlovsk
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Inozivikanwa seFar East muRussia, imwe ndege yendege yakarova muWestern Pacific Ocean panguva yekumhara muRussia Guta rePetropavlovsk.
Kubhururuka muRussian Far East kubva kuPetropavlovsk-Kamchatsky kuenda kuPalana kunogona kunge kwakauraya vafambi makumi maviri nevatatu nevatanhatu vevashandi vengarava yevaKamchatka Airlines.
Iyo AN-26 yakamisa kutaurirana isati yamhara ndokudonhera muPacific Ocean.
Emergency services vari panzvimbo vachitsvaga vakapona mumamiriro ekunze akaipa.
Ngarava dzekununura dzeRussia parizvino dziri mugungwa rakaomarara reWestern Pacific Ocean Chipiri masikati kune vakapona pane iyi ndege yeKamchatsky Airlines. Zviratidzo kubva mubhokisi dema zvaive zvave kuwanikwa.
Pakati pevanhu makumi maviri nemapfumbamwe vaive mumabhodhi paive nevana vaviri. Mamiriro ekunze akaomesesa mudunhu iri uye anogona kunge akonzera tsaona iyi.
Hurumende yemuno yakati ndege iyi yaive nechikwangwani chakakodzera chekukwira ndege uye vashandi vakapasa kufanoongorora.
Mhosva yemhosva yakatangwa nekutyora mitemo yekuchengetedza traffic uye mashandiro enhandare
Ndege haisati yasimbisa tsaona
Kamchatka Airlines mutakuri weRussia anogara kuPetropavlovsk-Kamchatsky Airport. Mutakuri akamboshanda charter masevhisi ane ngarava ye turboprop uye nhete-muviri michina.
Petropavlovsk-Kamchatskiy iguta uye rinotungamira, maindasitiri, sainzi, uye tsika muzinda weKamchatka Krai, Russia. Vagari vayo vane 179,780. Guta rinozivikanwa zvakanyanya sePetropavlovsk. Chirevo Kamchatsky chakawedzerwa kuzita repamutemo muna 1924.
Guta rine nzvimbo inoyevedza paAvacha Bay uye inofuratirwa nemakomo mahombe maviri uye yakakomberedzwa netambo refu yemakomo ane sinou.
Dzimwe nhau nezvekupunzika kwendege pa eTurboNews